Booliska: Weli waa ay adag tahay baarista dambiyada internet-ka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Booliska: Weli waa ay adag tahay baarista dambiyada internet-ka
La daabacay tisdag 7 augusti 2012 kl 09.50
Qof isticmaalaya internet.
Booliska ayaa sheegay in weli ay aad u adag tahay baaritaanka dambiyada ay kooxaha dambiilayaasha ay u adeegsadaan aalada internet-ka isgaarsiin ahaan inkastoo sharci xagga internet-ka ee soo baxay sanadkii hore lagu waday in uu fududeeyo howlaha baaritaanada dambiyada ka dhaca internet-ka.
Anders Ahlqvist oo ah dambi baare ka tirsan ciidanka booliska kuna xeel dheer fal dambiyeedyada IT ayaa waxa uu sheegay in dhibaatada jirta ay tahay in uusan jirin heshiis caalami ah oo u sahlaya booliska in ay helaan xogta ku keydsan bogaga servarada ee dalalaka kale caalamka.
- Qaanuunka hadda jira ee la socodka internet-ka waa mid ku ek dalka, halka howlaha kale ee shabakada internet-ka caalamka ay tahay mid aan xaduud laheyn, taasi oo ah mida abuureysa mishaakilka ka jira kiisas badan waayo marka aad raad ka hesho baaritaan aad waday oo xogta qaar taalo servarada Iswiidhan inta ka harsan waxay taallaa meelo kale oo caalamka ah mana garan kartid halka ay tahay, ayuu hadalkiisa sii Anders Ahlqvist.
Haddii uu jiro dambi weyn booliska Iswiidhan waxay caawinaad weydiisan karaan maxkamad mareykan ah tusaale si loo helo wada sheekeysi la isku dhaafsaday email-o ama sawir laga soo qaaday Twitter, Google, Facebook ama wax kale oo ka mid ah bogaga internet-ka mareykanka laakiin dhibka jira ayaa ah waxay taasi qaadataa waqti dheer, iyada oo suurtagalna aysan aheyn in waqti badan booliska keydiyaan email-da ay baarayaan ama sawirada waayo xeerka internet-ka ayaa mamnuucaya in xogta la keydiyo in ka badan lix bilood.
Anders Ahlqvist ayaa sheegay in sida caadiga ah ay qaadato labo ilaa iyo saddex bil in jawaab laga helo marykanka markii booliska Iswiidhan ay weydiistaan caawinaad xogo ay ugu baahin yihiin baartiaan dambi la xiriira internet-ka oo qeybo ka mid ah ay dhex taalo serverada mareykanka.
Laakiin waxuu sheegay in si gaabis ah loo helo warbixno markii ay kiiska uu yahay in maxkamadaha mareykanka ay go'aano ka soo gaaraan, tusaale ahaan haddii la rabo in sawir ama wada sheekeysi email laga soo dhex qaado akoon uu qof ku leeyahay bogga internet-ka.
Sarkaal ka tirsan booliska magaaladda Göteborg laguna magacaabo Urban Swahn ayay la tahay in jahawareer uu jiro baaritaanada dambiyada ku lugta leh adeegsiga internet-ka.
- Waa sida iyada oo la baarayo oo la galayo qof gurigiisa. Waana wax aan wanaagsaneen in qof gurigiisa la dhex galo laakiin markii uu inoo muuqdo dambi dhacay oo aan go'aansano in aan baarno, halkaasi runtii iima muuqato wax kala duwanaansho ah oo u dhaxeeya, ayuu yiri Urban Swahn.